Ogologo oge nke Eziokwu: Nzọụkwụ 8 na Njikere | Martech Zone
Oge Ezigbo nke Eziokwu: Nzọụkwụ 8 Dị Njikere
Bọchị Sọnde, Machị 24, 2013 Bọchị Sọnde, Machị 24, 2013 Douglas Karr
Ná ngwụsị afọ gara aga, m guzoro maka otu onye ọrụ iji mee ihe ngosi na Google Ogologo oge nke Eziokwu. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ mbọ na ihe a na-etinye n'ichepụta atụmatụ ahụ, maka ọtụtụ ndị na-ere ahịa oge a, ihe ahụ bụ ihe elementrị. Ihu ọma, oge ị na-eme mkpebi mgbe ị na-azụ ihe bụ Ogologo oge nke Eziokwu - ma ọ bụ naanị ZMOT.
Nke a bụ Ihe ngosi ZMOT Emere m:
A bụ ihe a zuru ezu video na isiokwu na-akpaghị aka ụlọ ọrụ dị ka ihe atụ:
Ọ bụ ezie na ZMOT nwere ike ọ gaghị abụ mgbanwe, Google na-edepụta atụmatụ ntụzịaka 8 nke m kwenyere na a ga-etinye n'ime usoro azụmaahịa ọ bụla:
Malite na Nweta ala gị - Gini bu ebum n’uche ahia gi?
Nwee njikere ịlele - must ga-enwerịrị ike ịlele nsonaazụ iji meziwanye ihe.
Bido site na isi - Kedu ka ndị mmadụ si achọta, itinye aka na ịzụta n'aka gị n'ịntanetị?
Debe nkwa ZMOT gị - Mgbe ha chọtara gị, ị na - enye ha ozi ha na - achọ?
Soro Iwu 10/90 - Tinye 10% nke ego gị n'ime ngwaọrụ na ọrụ iji bulie azụmaahịa gị.
Gaa Egwuregwu - Elegharala naanị asọmpi gị anya, lekwasị anya na ebe ọ ga-abụ ma ọ bụ lee anya karịa etu ha si achọta gị.
Lelee Micro Conversion - Ọ bụghị naanị maka ịzụta, lelee ọrụ mmekọrịta, ndebanye aha, nbudata, ndebanye aha, wdg. Nke na-eduga atụmanya ịghọ ndị ahịa.
Bido ida Ọsọ ọsọ - Gaa azụ site na atụmatụ buru ibu wee chọọ ụzọ iji mee ngwangwa na obere - nọrọ agile.
Budata nkọwa zuru ezu na Mpempe akwụkwọ ZMOT Jikere ma lelee Ogologo oge nke Eziokwu saịtị maka ozi ndị ọzọ.
Tags: akpaaka ahịaakpakanamdeụlọ ọrụ na-ere ahịa ụgbọ alagoogle +oge efuoge efu nke eziokwuZMOT